ဝန်ထမ်းများအကြား လုပ်ငန်းခွင်ကျင့်ဝတ်တွေကောင်းမွန်စေဖို့ နည်းလမ်း ၁၀ ခု | Mycanvas
ဝန်ထမ်းများအကြား လုပ်ငန်းခွင်ကျင့်ဝတ်တွေကောင်းမွန်စေဖို့ နည်းလမ်း ၁၀ ခု
လုပ်ငန်းခွင်ကျင့်ဝတ်တွေဆိုတာက ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအနေနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ သို့မဟုတ် တန်ဖိုးများလို့မှတ်ယူလို့ရပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်ကျင့်ဝတ်တွေမှာတော့ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးရဲ့ အပြုအမူတွေ၊ အလုပ်၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အပေါ် ထားရှိတဲ့ သဘောထားတွေပါဝင်ကြပါတယ်။
အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ခြင်းက အောင်မြင်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ သိထားကြတဲ့အတိုင်း ဒီလုပ်ငန်းခွင်ကျင့်ဝတ်တွေဟာလည်း လူတစ်ဦးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အောင်မြင်မှု‌အပေါ် သက်ရောက်မှုများရှိနိုင်မည်မှာ အသေအချာပင်ဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းခွင်ကျင့်ဝတ်များ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းအချို့မှာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်မှု၊ သမာသမတ်ကျမှု၊ အလုပ်နှင့်အသင်းဖော်များကို လေးစားမှု၊ အချိန်မှန်မှုနှင့် စည်းကမ်းတို့ဖြစ်သည်။ ထိုကျင့်ဝတ်တန်ဖိုးများသည် လူတစ်ဦးအား ပိုမိုတာဝန်ယူမှုရှိသော၊ ပို၍ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားကောင်းသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ် ပုံသွင်းပေးကာ ၎င်းတို့၏နေ့စဉ်ဘဝလှုပ်ရှားမှုအားလုံးအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ငန်းခွင့် ကျင့်ဝတ်တွေအတွက် နည်းလမ်း ၁၀ ခုကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
1. တိကျရှင်းလင်းသော ရည်မှန်းချက်များရှိခြင်း
– တိုင်းတာ၍ရနိုင်ပြီး သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ကာလတခုထားရှိခြင်း။
– လက်လှမ်းမီသော စိန်ခေါ်မှုမျိုးဖြစ်သင့်ခြင်း။
– အကောင်အထည်မဖော်မီ အဖွဲ့၀င်များမှ ကောင်းမွန်စွာ နားလည်လက်ခံမှုရှိခြင်း။
2. သင့်လျော်သော လမ်းညွှန်မှုပေးခြင်း
ဝန်ထမ်းများကို ပြုစုပျိုးထောင်ရန်အတွက် ကောင်းမွန်သော လမ်းညွှန်မှုနှင့် ပျိုးထောင်ရေးအစီအစဉ်များ လိုအပ်ပါသည်။ ခေါင်းဆောင်သူ / လမ်းညွှန်တစ်ဦးအနေဖြင့် သင့်အခန်းကဏ္ဍကို လက်ခံပြီး အထူးသဖြင့် ဝန်ထမ်းများ၏ ကနဦးနေ့ရက်များတွင် ခြေလှမ်းတိုင်း၌ သင့်လျော်သောလမ်းညွှန်မှုပေးရန် လိုအပ်ပါတယ်။
ငါပြောသလိုလုပ် ငါလုပ်သလိုမလုပ်နဲ့ ဆိုတဲ့မန်နေဂျာမျိုးကတော့ စံနမူနာကောင်းတခုမဖြစ်နိုင်တာ သေချာပါတယ်။ မိမိအဖွဲ့ဝင်တွကို ခွန်အားပေးတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ကိုဦးဆောင်တဲ့အခါမှာတော့ သင်ဟာ စံနမူနာကောင်းပြထားသလားဆိုတာ အမြဲတမ်း ဆန်းစစ်လေ့လာနေသင့်ပါတယ်။
4. မှန်ကန်သော အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပါ
ဝန်ထမ်းတွေအတွက် လုံခြုံနွေးထွေးတဲ့ အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်တခုက မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်အသေးအဖွားပြဿနာလေးတွေဆိုပေမယ့်လို့ ထပ်ကာထပ်ကာဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ လုပ်ငန်းခွင့်ကျင့်ဝတ်တွေအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိလာစေပါတယ်။ ဒါတွေကို မသိကျိုးကျွံပြုထားခြင်းက ဝန်ထမ်းတွေအပေါ် တာဝန်မကျေတဲ့သဘောထားနဲ့ သူတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို လျစ်လျူရှုထားသလိုမျိုးဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဝန်ထမ်းတွေကြားထဲ ကိုယ့်အလုပ်အပေါ်တာဝန်ယူမှုနည်းပါးလာတဲ့ ရလဒ်တွေကိုတွေ့လာနိုင်တဲ့အတွက် မှန်ကန်တဲ့ အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်တခုကို ဖန်တီးပေးဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
5. ပရောဖက်ရှင်နယ်ဆန်မှု ရှိခြင်း
မန်နေဂျာတဦးအနေနဲ့ ကိုယ့်လက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့ ပရောဖက်ရှင်နယ်ဆန်မှုကို မိမိရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ မြှင့်တင်တွန်းအားပေးနိုင်ပါတယ်။
– မိမိစကားအား စောင့်ထိန်းခြင်းနှင့် ဝန်ထမ်းများအား မိမိအပေါ်ယုံကြည်မှုရှိစေခြင်း။
– စဥ်ဆက်မပြတ် ကြိုးစားမှုရှိခြင်း။
– လေးစားမှု၊ ရိုးသားမှုနှင့် ပွင့်လင်းမှုရှိခြင်း။
– စဥ်ဆက်မပြတ် သင်ယူလေ့လာခြင်း။
6. စည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ခြင်း
စည်းကမ်းတွေက လုပ်ငန်းခွင်ဟန်ချက်ကို ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။ အဆက်မပြတ်စကားတွေပြောနေတတ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အလုပ်လုပ်ရတာ နှစ်သက်ပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် စိတ်အနှောင့်အယှက်တွေ ကြီးကြီးမားမားနဲ့ နေ့စဉ်အလုပ်တွေကို အာရုံစိုက်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါသလား။ ဒါ့ကြောင့်မို့လို့ စည်းကမ်းတွေဟာ ဝန်ထမ်းတွေအတွက် အဖွဲ့အစည်းရည်မှန်းချက်တွေအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
7. ဝန်ထမ်းများ၏ လိုအပ်ချက်ကို နားလည်ပေးခြင်း
ဒီနေ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်က တဦးနဲ့တဦးမတူပါဘူး။ လုပ်နည်းကိုင်နည်းတွေ ပြောင်းလဲနေသလို ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ဟာလည်း အမြဲပြောင်းလဲနေပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အလုပ်လုပ်တဲ့မိဘတွေက ကလေးတွေကို အချိန်ပေးနိုင်ဖို့ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တဲ့ အလုပ်ချိန်မျိုးကိုမျှော်လင့်ကြပြီး အခုမှအသစ်ဝင်လာတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကတော့ လေ့ကျင့်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်တွေကို ပိုလိုလားကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးက အလုပ်အပေါ်မှာ တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်မို့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းဖြင့် သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်စေနိုင်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်ပျော်ရွှင်မှုကို ဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
8. စဉ်ဆက်မပြတ် အကြံပြုခြင်း
အကြံပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဥ်သည် လုပ်ငန်းခွင်ဆက်သွယ်ရေးစက်ဝန်းအတွက် မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး စဉ်ဆက်မပြတ်အကြံပြုခြင်းသည် ကောင်းမွန်သောအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ရာတွင် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေပါတယ်။ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုအတွက် သမာသမတ်ကျပြီး အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အကြံပြုချက်တွေဟာ အဖွဲ့အစည်းတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။
9. စိတ်အားထက်သန်မှုများကို အမြဲရှင်သန်စေခြင်း
လူတိုင်းဟာ မိမိရဲ့ အားထုတ်မှုကို အသိအမှတ်ပြုခံချင်ကြသူတွေချည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆုချီးမြှင့်ခြင်းနဲ့ အသိအမှတ်ပြုခြင်းတွေက ဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုအရှိန်အဟုန်ကို အမြဲရှင်သန်စေဖို့အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့အလေ့အကျင့်တခုဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေ အမြဲစိတ်အားထက်သန်နေဖို့နဲ့ အသိအမှတ်ပြုခံရဖို့က ခေါင်းဆောင် မန်နေဂျာတွေမှာဝာာဝန်အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
10. အခက်အခဲအတားအဆီးများ ဖယ်ရှားပေးခြင်း
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကြား ကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကျင့်ဝတ်တွေရှိအောင်လုပ်ဖို့ သူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကို ဖယ်ရှားပစ်ရပါမယ်။ အကယ်၍ ဝန်ထမ်းတွေက အလုပ်မှာစိတ်မပါ၊ စိတ်ဓာတ်ကျနေကြပြီဆိုရင်တော့ ကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကျင့်ဝတ်တွေကို မလိုက်နာနိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းများတဲ့အတွက် လုပ်ငန်းခွင်မှာရှိတဲ့ အခက်အခဲအတားအဆီးတွေကို ဖော်ထုတ်ဖို့လိုပါတယ်။